copac on News24
ARTICLES RELATING TO COPAC
The number 13 is considered an unlucky number in some cultures, but for Zimbabwean President Robert Mugabe, 2013 spells doom for his rivals as his country gears up for elections.
Mugabe 'not going anywhere'
MDC and Zanu-PF members who want to block President Robert Mugabe from contesting the elections using the new constitution are wasting their time, as "he is not going anywhere", Zimbabwe’s war veterans say.
Zimbabwe's president Robert Mugabe won't sign the draft constitution into the new supreme law of the country as long as it "disqualifies him from contesting the next elections", a senior Zanu-PF official says.
Zimbabwe will hold a referendum in January 2013, as having it this year only applies theoretically, the constitutional parliament select committee says.
Zimbabwean leader Robert Mugabe has summoned his party’s co-chairperson to Copac to explain how a controversial clause that could bar him from contesting the next election passed through a first draft, a report says.
Outrage over Zim's 1st draft constitution
Zimbabwe's first draft constitution has sparked outrage with legal experts equating it to an orchestrated attack on the country's moral, cultural and revolutionary pillars, a report says.